Home लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेड
कम्पनीको नाम : लुम्बिनी बैङ्क लिमिटेड
स्थापना : विसं २०५५ श्रावण १
सम्पर्क कार्यालय : दरबार मार्ग,काठमाडौँ
अध्यक्ष : सुवर्णलाल श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : शोभनदेव पन्त
शाखा कार्यालय : १३
संस्थापक : ६६ प्रतिशत
सर्वसाधारण : ३४ प्रतिशत
यस बैङ्कले विसं २०५५ श्रावण १ देखि ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पाइला टेकेको हो । यस बैङ्कमा संस्थागत प्रवर्द्धकको ४२ प्रतिशत, व्यक्तिगत प्रवर्द्धकको २४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३४ प्रतिशत लगानी रहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ दशमलव ५५ प्रतिशत लगानी छ । चुक्ता पूँजी बढाउन यस बैङ्कले गत वर्ष१० बराबर ३ (१०:३) को अनुपातमा ३० लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो । त्यसपछि अहिले यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यही मङ्सिर २५ गते यस बैङ्कको १३औँ वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ ।
यस कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यको प्रवृत्तिलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा आरएसआई रेखा न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । यसले यस कम्पनीको शेयर मूल्य अहिले ढलपल अवस्थामा रहेको सङ्केत गर्दछ । लामो समयदेखि न्यूट्रल जोनमा उत्तारचढाव गरिरहेको यस बैङ्कको आरएसआई रेखा अहिले स्केल ४५ तिर उन्मुख रहेको छ । सन् २०१० फेब्रुअरीमा यस बैङ्कको आरएसआई रेखा स्केल ३० भन्दा तल आएर ओभरसोल्ड (अत्यधिक विक्री) को अवस्था देखाएको थियो । त्यस अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिएर खरीदकर्ताहरू बढेपछि यस कम्पनीको शेयर मूल्य विस्तारै सुधार भएको थियो । फलस्वरूप, आरएसआई रेखा पनि उकालो लागेर अप्रिलको अन्तिम तथा मेको शुरूतिर स्केल ७० सम्म पुगेको देखिन्छ । त्यसलगत्तै कम्पनीको शेयर मूल्य ओरालो लागेपछि आरएसआई स्केलको पनि अधोगति शुरू भयो । विगत ६ महीनादेखि यसको आरएसआई रेखा स्केल ५५ र ३५ का बीचमा तलमाथि गरिहेको छ । यी सबै कुराको विश्लेषण गर्दा यस कम्पनीको शेयरमा विक्रीचाप केही बढी नै भएको देख्न सकिन्छ । त्यसैले यस बैङ्कको शेयर मूल्य अझै केही घट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसकारण, यसको शेयर विक्री गर्न चाहनेहरूले केही समय नहतारिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ भने खरीद गर्न चाहनेहरूले ओभरसोल्ड वुलिस रिभर्सल प्यार्टनको प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त होला ।
विगतका वर्षा ऋणात्मक अवस्थामा रहेको यस बैङ्कको जगेडाकोष क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ । साथै लामो समयदेखि उठ्न नसकेको खराब कर्जा पनि विस्तारै असूल भइरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप, यस बैङ्कका वित्तीय परिसूचकहरू अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् । त्यसकारण, यस बैङ्कले शेयरधनीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिफल वितरण गर्न सकेको छैन । आव ०६७/६८ को प्रथम त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ५ करोड ५४ लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ६६ दशमलव ४८ प्रतिशतले कम हो । खराब वित्तीय अवस्थाबाट भर्खरै सुधार हुन शुरू भएको अवस्थामा गत वर्षो तरलता सङ्कटको सामना गर्न परेकाले यस कम्पनीको खुद मुनाफा यति ठूलो परिमाणमा घटेको हो ।
अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा यस बैङ्कको खुद नाफा घटे पनि जगेडा कोष भने ८ सय ६५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत वर्षरू. २ करोड २४ लाख रहेको यसको जगेडा कोष यस वर्ष रू. २१ करोड ६४ लाख पुगेको छ । यसबाट बैङ्कको वित्तीय अवस्थामा अझै पनि धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन पनि शून्य दशमलव ३२ प्रतिशतको सीमान्त दरले घटेको छ । तर बैङ्कको लगानी भने १ सय ११ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा बैङ्कको खराव कर्जा उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि जोखिमभार सम्पत्तिबाट रू. १९ करोड ६९ लाख फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ । त्यस्तै बैङ्कको निष्त्रिmय कर्जा ३ दशमलव ४ प्रतिशत कम भएर अहिले ३ दशमलव ५८ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ ।
यस बैङ्कको वित्तीय परिसूचक अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि यस बैङ्कले हकप्रद शेयर निष्कासनबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको प्रतिफल दिएको छैन । तर सो अवधिमा बैङ्कको मूल्य-आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आय तथा किताबी मूल्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ ।
यस बैङ्कको अहिले किताबी मूल्य रू. १ सय १२ दशमलव ४४ रहेको छ भने किताबी मूल्य अनुपात २ दशमलव २२ गुणा छ । यसले यस बैङ्को शेयर बजार मूल्य किताबी मूल्यभन्दा २ दशमलव २२ गुणा बढी देखाउँछ । आर्थिक वर्ष०६६/६७ को खुद मुनाफा र गत कात्तिक ३० गतेको शेयर बजार मूल्य रू. २ सय ५० का आधारमा यस कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी रू २३ दशमलव ४९ देखिन्छ । भने मूल्य-आम्दानी अनुपात १० दशमलव ६४ गुणा छ, जसअनुसार यस बैङ्कले कमाउने रू. १ प्राप्त गर्नका लागि लगानीकर्ताहरू रू. १० दशमलव ६४ तिर्न तयार भएको देखिन्छ ।
यस बैङ्कको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा औसत रूपमा कारोबार हुने गरेको छ । यस कारण लगानीकर्ताहरूले यो शेयर किन्न र बेच्न केही समय पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । यसले छिटो- छिटो शेयर खरीद-विक्री गर्न चाहने लगानीकर्तालाई केही अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।
सन् २००९ जनवरी १ देखि हालसम्मका ४ सय ४ दिनमा जम्मा ३ हजार ४ सय ३२ कारोबारबाट यस कम्पनीका कुल ६ लाख ७४ हजार ३ सय ३१ कित्ता शेयर खरीद-विक्री भएको देखिन्छ । उक्त अवधिको शेयर कारोबारमा यस बैङ्कको सबैभन्दा उच्च मूल्य रू. ५ सय ७ तथा न्यून मूल्य रू.२ सय १६ कायम भएको छ । यसको मूल्य कात्तिक ३० गते रू. १० ले २ सय ५० मा बन्द भएको छ ।
५२ दिनको कारोबारअनुसार यस कम्पनीको सबैभन्दा उच्च शेयर मूल्य रू.३ सय ४० र सबैभन्दा न्यून मूल्य रू.२ सय १६ हो । हाल यस कम्पनीको स्ट्यार्ण्र्डड डेभिएशन २ दशमलव ८२०४ छ । यसले अन्य वाणिज्य बैङ्कको तुलनामा यस बैङ्को शेयरमा खासै जोखिम नरहेको देखाउँछ ।
विकास बैङ्कको नाफा उच्चदरमा वृद्धि
मङ्सिर १, काठमाडौं । चालू आव ०६७/६८ को पहिलो त्रैमासमा ३१ वटा विकास बैङ्कको खुदनाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा औसत २ सय ५२ प्रतिशतका दरले बढेको छ । ती बैङ्कको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा प्रकाशित तथ्याङ्कका आधारमा उक्त कुरा पत्ता लागेको हो । तीमध्ये भिवोर विकास बैङ्कको खुदनाफा सबैभन्दा धेरै ५ हजार ३ सय ८२ प्रतिशतले बढेको सो बैङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि, भृकुटी विकास बैङ्क र मालिका विकास बैङ्कको खुदनाफा क्रमश: ८ सय र ४ सय ५० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, नारायणी र सिर्द्धार्थ विकास बैङ्कको खुदनाफा सबैभन्दा धेरै क्रमश: ९९ र ७२ प्रतिशतले घटेको ती बैङ्कको प्रतिवेदनमा छ ।
समीक्षा अवधिमा ती बैङ्कको औसत खुद ब्याज आम्दानी ६२ प्रतिशतका दरले बढेपछि त्यसको प्रभाव खुदनाफामा परेको देखिन्छ । शाइन डेभलपमेण्ट बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी सबैभन्दा धेरै १ सय ९५ प्रतिशतले बढेको सो बैङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि मनकामना डेभलपमेण्ट बैङ्क र उद्यम विकास बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी क्रमश: १ सय ५० र १ सय ३६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी, इन्फ्राक्स्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट बैङ्क र कञ्जुमर डेभलपमेण्ट बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी सबैभन्दा धेरै क्रमश: ९२ प्रतिशत र ३० प्रतिशत घटेको ती बैङ्कको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समीक्षा अवधिमा बैङ्कको निक्षेप औसत ५६ प्रतिशतका दरले बढेको देखिएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासमा कुल रू. ३७ अर्ब रहेको ती बैङ्कको निक्षेप यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा बढेर रू. ५४ अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरी, ती बैङ्कको कुल लगानी र कर्जा सापटी क्रमश: ३६ प्रतिशत र ४५ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा सापटी तथा लगानी दुवै उच्चदरले बढेकाले पनि खुदनाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।
रकमका आधारमा हेर्दा ती बैङ्कको समग्र खुदनाफा समीक्षा अवधिमा सीमान्तदरमा घटेको छ । अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १ अर्ब १४ करोड २९ लाख रहेको ती बैङ्कको खुदनाफा २ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेर अहिले रू. १ अर्ब ११ करोड ६२ लाखमा सीमित भएको छ । ती बैङ्कको कुल लगानी अघिल्लो वर्षो सोही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशतले घटेर रू. ५ अर्बमा सीमित भएपछि त्यसको सङ्कुचनकारी प्रभाव खुदनाफामा परेको हुन सक्छ । अहिले वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका केही बैङ्कहरूले भर्खर-भर्खर कारोबार शुरू गरेका कारण तिनीहरूको सञ्चालन खर्च उच्च छ । फलस्वरूप, ती बैङ्कको खुदनाफा अत्यन्त न्यून छ । त्यसैगरी, केही पुराना विकास बैङ्कहरूको पनि खुदनाफा अघिल्लो वर्षो तुलनामा घटेको छ । यिनै कारणले ती बैङ्कको समग्र खुदनाफा घटेको देखिन्छ । तर, औसतले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले समग्रमा बैङ्कहरूको खुदनाफा उच्चदरमा बढ्नु सकारात्मक हो ।
(विस्तृत विवरण गृहपृष्ठको अङ्क समाचारमा)